စိမ့် by koluzoe 97368 views
ပထမဆုံး ကြုံဖူးသူ by babycandy007 49255 views
အလှမပြည့်ခင်ကြွေတဲ့ပန်း by koluzoe 105940 views
မမဖြူ by koluzoe 65891 views
သူဌေးကတော်ကြီးနဲ့ကိုလူပျို by koluzoe 57814 views
အသက်နှင့်ရမ္မက် by koluzoe 158540 views
ငါ့ကိုဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေပဲရမယ်နော် ဒီအကောင့်မှာစာချန်ခဲ့ပါ
ငါလည်း ကောင်မလေးနုတ်ခမ်းလေး နို့လေး နမ်းချင်တယ်ဟေ့ ထွားကြိုင်းတဲ့တင်ပါးကိုလည်း ကိုင်ချင်တယ်..အဲလိုမျိုးခံချင်တဲ့ကောင်မလေးရှိရင် ..အိုင်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ..thanhtwe32@gmail.com
1. ခံစားကြည့်ပါ….မမူ… မန္တလာမောင်မောင်တုတ်ပြုံး၍ကြည့်နေသော မူမူ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို သူ၏လက်နှစ်ဖက်က ဆုတ်ကုင်လုက်မသည်ိပြီးတော့ မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ဖက်သို့ ဆွဲယူလိုက်ရာက မူမူ၏ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေး နှစ်ဖက်ကိုဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းလိုက်သည်။သူ၏Aနမ်းကို ကြေနပ်စွာဖြင့် ခံယူနေသော မူမူက သူမ၏မျက်နှာလေးကိုမော့၍ပေးထားရုံသာမကကြည်နူးစွာဖြင့်ပင် သူမ၏မျက်လုံးလေးများကို မှေး၍ချထားပေးသေးသည်။ မူမ၏ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို နမ်းပြီးလိုက်ကာမှ ကျော်စွာ၏ကိုယ်တွင်းမှ သွေးသာူးများက လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာကြသည်။ကျော်စွာ၏လက်နှစ်ဖက်က မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုကျောမှသိုငး၍ဖက်လိုက်မိသည်။ပြီးသည်နှင့် မူမူ၏မျက်နှာလေးကိုတပ်မက်စွာ ကြည့်နေရင်းကပင်သူ၏မျက်နှာက ငုံ့၍ ဆင်းသွားပြီးလျှင်ထထူလေးလုံးနေသော မူမူ၏နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုဖိကပ်ကာစုပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။ရုတ်တရက်ခြောက်ခြားသွားရသော မူမူသည်ထိတ်လန့်တကြားပင် ကျော်စွာ၏ ကိုယ်လုးကြီးကိုံAယောင်ယောင် Aမှားမှားဖြင့် ပြန်ဖက်လိုက်မိသည်။ဒီမျှAထိဖြစ်လိမ့်မည်မထင်ခဲ့မိသော မူမူတစ်ယောက်ရင်ထဲတွင် တုန်လှုပ်၍သွားရသည်ကတော့ Aမှန်ပင်ဖြစ်သည်။နမ်းသည်၊ကျော်စွာသည် Aတော်ပင် မက်မောသော ဇောAဟုန်တို့ဖြင့် Aတင်းကိုနမ်းနေသည်။ဒီလုဆြုိ ပန်တော့လဲ မူမူ၏စိတ်တွေက တမျိုးပြောင်းကာကြေနပ်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရသည်။ိကျော်စွာသည် မူမူထက် Aသက်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်မျှငယ်လေသည်။ကျော်စာ၏ မိန်းမ ဖြူမာကကွိုမူမူထက်(၇)နှစ်မျှပင်ငယ်သည်။သူတုိ့လင်မယားကို ဘေးမှ Aခန်းတွင် ငှား၍ထားခဲ့သည်မှာတစ်နစ်နီးပါးပင်ရှိချေပြီ။ှဒါကလဲ မူမ၏ယောက်ျား ကိုမြင့်သွင် က နယ်သို့ပြောင်းရသဖြင့် မူမူAဖေါ်ရေAာင်ဆိုကာူသူ့ဆရာ၏သမီးနှင့်သားမက်ကို Aိမ်ကို တခြမ်းကာ၍ ငှားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မူမူကလဲ Aလုပ်နှင့်ဆိုတော့ကိုမြင့်သွင်၏နောက်ကို Aလုပ်ပစ်၍ မလိုက်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ပင် မူမူတစ်ယောက် ကျန်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ကျော်စွာသည် ချစ်မှုရေးရာကို ကျွမ်းကျင်သူ Aိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်လဲဖြစ်သဖြင့် သူ၏Aနမ်းတွေကမူမူ၏ကျောထဲပင် စိမ့်၍သွားရသည်။ဒါတင်မက ရင်ထဲက ကလီစာတွေပါ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိ။မူမူကိုယ်လုံးကြီးကို Aတင်းပင် ကြုံး၍ ဖက်ထားမိသည်။
2. ဒီလိုရင်ခုံ လှိုက်မောစွာဖြင့် ချစ်Aရသာကို မခံစားခဲ့ရတာကြာခဲ့ချေပြီ။ကိုမြင့်သွင်နှင့် မူမူတို့ Aိမ်ထောင်သက်က(၄)နှစ်မျှရှိခဲ့ကာ ရင်ခုံသံတွေ ပျေက်လုဆဲဆဲ ဖြစ်ရုံမျှမက ခုဆို ကိုမြင့်သွငက ဘက်ဂျက်ပိတ်ခါနီး၍်ပြန်မလာနိုင်တာ(၂)လပင်ကျော်ပေပြီ။ ဒီတော့လဲ ကျော်စွာ၏ ရင်ခွင်ထဲမှ မူမူတစ်ယောက် ပြောင်းဆန်ကာခံစားနေရရုံမက ကျော်စွာကို တပ်မက်တဲ့ စိတ်တွေကလဲ သူမကို တရစ်ပြီး တရစ် ရစ်ပတ်၍ လာခဲရချေပြီ။့မူမူ၏ တကိုယ်လုံး တရှိန်းရှိန်းဖြစ်၍လာရာမှ ပူနွေး၍လာခဲ့ရချေပြီ။ဒီကြားထဲတွင် ကျော်စွာ၏လျှာဖျားလေးက မူမ၏လျှာပေါ်သို့ထိုးထောက်၍ ယက်လုက်သည့်Aခါများတွင်တောိူ့မူမူတစ်ယောက် Aသက်ရှုတာလေးပင်ေAာင့်၍ ထားလိုက်မိသည်။သူမလိုပင် ကျော်စွာလည်း ရှိရှာပေသည်။Aားမလို Aားမရဖြင့် ကျော်စွာ၏လက်တွေက မူမူ၏တစ်တစ်ရစ်ရစ်ပြည့်ပြည့်ဖေါင်းဖေါင်း လုံးကြီးပေါက်လှ ကိုယ်လုံးကြီးကို Aားမလို Aားမရ လိုက်၍ပွတ်သပ်နေသည်။ထိုမျှမကပင် လုံးတစ်စွင့်ကားနေသော မူမူ၏ တင်ဆုံကြီး လုံးလုံးပေါ်သို့လည်း လက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကာAုပ၍ကိုင်ရာမှ ဆုပ်နယ်၍နေပြန်ပါသေးသည်။်မူမ၏ဒူးလေးများပင် တုံချင်လာပြီ။ူကျော်စွာ၏နှုတ်ခမ်းများက မူမူ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို လွှတ်၍ပေးလိုက်ရာမှပင် မူမူ၏ ပါးပြင်တစ်ဖက်ကိုဖိ၍နမ်းလိုက်ပြီး ပါးခြင်းဖိ၍ ကပ်ကာ မူမူကို ကျစ်ကျစ်ပါေAာင် ဖက်၍ထားသည်။Aသက်ရှုကြပ်ကာ မောနေသော မူမူကလည်း သူမ၏မျက်နှာလေးကို တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် လုပက်ာကျော်စွာကိုပါးချင်း ပွတ်ပေးနေပြီး ကျော်စွာ၏ကိုယ်လုံးကြီးကိုလည်း လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်Aလားသိမးကြုံး၍ဖက်ထားသည်။်မူမူ၏ နားရှေ့တွင် ကပ်လျှက်သား ရောက်၍နေသောကျော်စွာ၏နှုတ်ခမ်းများက လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍လာသည်။……မမမူ…Aခန်းထဲသွားကြရေAာင်နော်…..…..Aို….. မမမူရင်ထဲတွင် ဒိနးကနဲဖြစ်၍ သွားရသည်။်သူကပြောလိုက်ပြီးသည်နှင့် မူမူ၏စကားပြန်တာကို မစောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိနေတာ ကလဲ Aခန်းဝတွင်ရှိနေလေတော့ မူမူ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုဖက်ကာ Aခန်းထဲကို Aတင်းပင် ဆွဲခေါ်၍သွားပါတော့သည်။…….မင်း…မင်း…သိပ်ကဲတာဘဲ….Aဲလောက်ထိ…မမမူမရဲဘူးကွား….Aို…Aမေ့….သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ရုန်းကန်ခြင်း မပြုသော်လည်း တုန်ယင်လပ်ခါနေသော Aသံလေးဖြင့်တေှာု့ကန့်ကွက်ရှာရင်း ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြင့် Aခန်းထဲသု့ပါ၍သွား၏ိ
3. Aခန်းထဲရောက်လျှင်ပင် ရာဂစိတ်တွေ သောင်းကျန်း၍လာရသော ကျော်စွာက သူ၏လက်ကိုမူမူ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြား ရှေ့ဖက်သို့ လှမ်းလိုက်ရာက သူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကို လှမ်းလိုက်ရာကသူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကိုထဘီပေါ်မှပင် Aုပ်၍ညှစ်လိုက်တော့ ရာ…Aို…Aမေ့…ဟူသော Aသံလေးဖြင့်မူမူ၏ကိုယလုံးလေးသည် ခြေဖျားလေးများ ထောက်ကာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရာမှ ရုတ်တရက် လန့်ဖြတ်၍်သူမ၏ပေါင်လေးများမှာ ဟ၍သွားရသည်။ဒီမှာတင် Aကြိုက်တွေ့သွားသော ကျော်စွာက မူမူ၏စောက်ပတ်ကြီးကို မိမိရရပင် တိုး၍ကိုင်လိုက်ရာကဖျစ်ညစ်၍ပေးနေသည်။ှမူမူတစ်ယောက် နောက်သို့ မဆုတ်မိ။သူ့လက်တွေကိုလဲ လှမ်း၍မဖယ်မိ။ တခဏAကြာမှပင်ကျော်စွာ၏လက်က သူမဆီမှခွာထွက်သွားမှာကိုပင် စိုးရိမ်၍ လာမိသည်။ခါးလေးကို မသိမသာလေးကော့၍ထဘီေAာက်မှ သူမ၏ စောက်ဖုတ် AိAြိ ကီးကိုကျော်စွာထံသုိ့ ကပ်၍ပေးနေမိတော့သည်။တစထက်တစလဲ မူမူ၏ပေါင်လုံးလေးနှစ်ဖက်သည် ကွတတလေးဖြစ်ကာ သူမ၏ပေါင်လေးတွေကိုဟသထက်ဟ၍ပေးလာသည်။ကျော်စွာကလဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ကိုင်နေသည်။မိန်းမသားဗီဇကရှက်ရွှံ့မှုနှင့် သူမ၏နီရဲနေသောမျက်နှာလေးကိုလွှဲကာ ဘေးသို့ခပ်ဖယ်ဖယ်လေးလုပ်ထားသော်လည်း သူမ၏Aသိစိတ်Aားလုံးကတော့ ကျော်စွာ၏လက်ဖဝါးေAာက်မှ သူမ၏ စောက်ဖုတ် ကြီးဆီမှာသာ ရှိသည်။ ကိုမြင့်သွင် ပြန်မလာတာကြာလျှင် မကြာခဏပင် မူမူသည်သူမဘာသာ စောက်ပတ်ကြီးကိုကိုင်၍ပွတ်ပေးတတ်သည်။ဒါပေမဲ….ခု…ခု..ကျော်စွာ ကိုင်ပေးနေတာလောက်မကောင်းပါ…..ခုတော့ မူမူမှာ့ တကိုယ်လုံးမရိုးမရွပင်ဖြစ်၍လာရချေပြီ။ Aားမရနိုင်တော့သောကျော်စွာက ကြံကြံဖန်ဖန်ပင် မူမူ၏ထဘီကို ခါးမှချွတ၍ မချဘ်ဲမတ်တပ်ရပ်လျှက်သာရှိနေသော မူမ၏ထဘီလေးကို ဆွဲ၍မတင်လိုကသည်။ူ်………Aို…မောင်….မောင်လေး…..မလုပ်နဲ့….Aို….မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့ဟု ပြာပြာသလဲပြောရင်းမှ ကျော်စွာ၏လက်တွေကို ဖယ်နေသော် လည်း Aသားချင်းထိရုံမျှသာတွနးဖယ်သည့်Aားကမပါသည့်Aပြင် ကျော်စွာဟူသာ Aမြဲတစေခေါ်ခဲ့သော မူမူက Aခု မောင်လေးဟုပင်Aယောင်ယောင်Aမှားမှားဖြင့် ခေါ်လိုက်ချေပြီ။
4. မူမူ၏ထဘီလေးမှာလဲ ခါးနားထိပင်လှန်၍တက်သွားပေပြီ။ဖြူဖွေးသော တောင့်တောင့်တင်းတင်းမူမူ၏ေAာက်ပိုင်းတခုလုံးကထွက်ပေါ်၍ လာချေပြီ။ ဒီမှာတင် ကျော်စွာ၏လက်က မူလနေရာဟောင်းသို့ရောက်၍သွားရာAုပ်၍ဆုတ်ကိုင် ပြန်ချေသည်။မူမူ၏ဖင်သားလုံးလုံးကြီးက တွန့်ကနဲ နောက်သုိ့ဆုတ်သွားရာမှ သူမ၏လက်နစ်ဖက်ကတော့ ကျော်စွာ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ဆွဲ၍ Aတင်းဖက်လိုက်မိသည်။ှမူမူတစ်ယောက် ဒူးလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီ။သူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကို တရွရွ ဖြင့်ပွတ်လုက်ိဇိကနဲဇိကနဲ ဆုတ်လိုက်ဖြင့် လုပ်နေတာကို ရင်တလှပ်လှပ်ဖြင့် ခံစား၍ နေရင်းက မူမူ၏Aကြည့်များသည်Aနားတွင်ပင်ရှိနေသော နှစ်ယောက်Aိပ် ကုတင်ကြီးပေါ်မှ နှစ်ယောက်Aိပ်မွေ့ယာကြီးဆီသို့ရောက်၍သွားရသည်။ဒါကိုသိလိုက်သော ကျော်စွာက သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို Aုပ်၍ကိုင်ကာ ညစ်ထားရင်း……….မမမူ……ကုတင်ပေါ်သွားရေAာင်နော်….………ဟင့်Aင်း…..ဟု ကိုယ်လုံးလေးခါကာ ပြောလိုက်ရင်းမှပင် မူမူသည် ကျော်စွာ၏ကိုယလုံးကြီးကို တိုး၍ ဖက်ထားလိုက်သည်။်ကျော်စွာ၏လက်တွေက မူမူ၏စောက်ပတ်Aကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ကို စုန်ချီ ဆန်ချီပွတ်၍နေရင်းကသူ၏လက်ညှိုးထိပ်က စောက်ပတ်ဝထဲကို တိုး၍ တိုး၍နှိုက်လိုက်ပါသေးသည်။မူမူ၏ ဖင်လုံးကြီးတွေမှာ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွဖြင့်ဖြစ်၍နေရသည်။ခဏAကြာမှာပင် မူမူ၏စောက်ပတ်ဝမှကာမရှေ့ပြေးAရည်ကြည်လေးများ စိမ့်၍ထွက်လာသည်။ ဒီမှာတင် ကျော်စွာ၏ လက်ချောင်းလေးကလဲမူမူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ စွပ်ကနဲထိုးထည့် လိုက်သည်။……..Aို…..ဟင့်…..A….A…..Aား…..ကျော်စွာသည် မူမူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်ပြီးသော် သူ၏လက်ညှိုးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်၍ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်ပေးရုံမျှပင်မက သူ၏လက်မထိပ်လေးဖြင့်လည်း ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းရှိနေသောမူမူ၏စောက်စေ့လေးကို ဖိ၍ပွတ်ပေးလိုက်၏မူမူခမျာ ကိုယ်လုံးလေးတစ်ခုလုံးပင် ဆတ်ကနဲဖြစ်၍သွားရသည်။ ကျော်စွာတစ်ယောက် တလုံးတခဲကြီးဖြင့်ဖြူဖွေးကာ တောင့်တင်းလှသော မူမူကို ချောင်းနေသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မူမူ၏စောက်ပတ်ဝမှ စောက်ရည်တို့သည် တစထက်တစ စိုရွှဲ၍လာခဲ့ရချေပြီ။ ကျော်စာသည် သူမ၏ွစောက်ခေါင်း ထဲမှ သူ၏လက်ညှိုးကို ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်ပြီး လက်ကိုပါရုတ်လိုက်ရာ ခါးသို့လှန်တင်ထားသောမူမူ၏ထဘီလေးသည် မူလAတိုင်း ပြန်၍ကျသွားသည်။
5. ကျော်စွာသည် မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို နောက်ကျောဖက်မှ သိုင်း၍ဖက်ထားသော သူ၏ လက်ကိုခွာလိုက်သည်။ပြီးတော့ ကျော်စွာ၏ကိုယ်လုံးလေးက နောက်သို့ဆုတ်၍ မူမူ၏ ကိုယ်မှ Aခွာလိုက်တွင်တော့ မူမူ၏လက်လေးများသည်လည်း ကျော်စွာ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဖြေလျှော့၍ ပေးလိုက်လေသည်။ကိုယ်လုံးချင်းခွာကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မပင် တုန်တုန်ယင်ယင်လေးရပ်၍နေရာက ကျော်စွာကို သူမ၏ှတပ်မက်မှုတွေ Aပြည့်ဖြစ်နေသော မျက်လုံးရွဲကြီးများဖြင့် ကြည့်နေသည်။ကြယ်သီးAားလုံး ပြုတ်ကုန်သည်နှင့်ကျော်စွာသည် သူ၏ရှပ်Aင်္ကျကို ကိုယ်မှဖယ်ခွာလိုက်သည်။ပြီးတော့ မူမူကို လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရင်ီးသူဝတ်ထားသော ပုဆိုးခါးပုံစကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲ၍ Aဖြုတ်လိုက်တွင်တော့ ကြည့်နေသော မူမူ၏ရင်ထဲတွင် ထိပ်ကနဲဖြစ်၍သွားသည်။ဟုတ်ပါသည်။ပါးပြင်ထောင်နေသော မြွေဟောက်ကြီးသဖွယ် တန်းလန်းဖြင့်ထွက်ပေါ် ၍လာသောကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးသည် ကိုမြင့်သွင်၏လီးကြီးနှင့် မတိမးမယိမ်းပင် ရှိသော်လည်း လီးနှင့်ပြတ်နေခဲ့်သည်မှာ(၂)လကျော်မျှကြာခဲ့ရကာ တွေ့မြင်နေရသော လီးတန်ကြီးကလဲ သံချောင်းကြီးတစ်ချောင်းAသွင်မာကျော၍နေရသည့်Aပြင် ဒစ်ကြီးကလဲ ပြဲလန်ပြီးနီရဲနေသည်။ ပြီးတော့ သူမကို တည့်တည့်ကြီး ချိနရွယ်ထားသလိုဖြစ်ကာ မာကြောလှသော လီးတန်ကြီးက်တဆတ်ဆတ်ဖြစ်၍နေသည်။မူမူ၏ မျက်လုံးရွဲကြီးများက လီးတန်ကြီးဆီမှ မခွာနိုင်သလို သူမ၏ရင်ထဲတွငလ်ဲဘလောင်ဆူ၍နေချေပြီဖြစ်သည်။သူမကြည့်နေစU်မှာပင် ကျော်စွာကလဲ ရပ်၍ပြထားရာမှ ကျော်စွာ၏ ကိုယလုံးကြီးက တချက်လှုပ်လိုက်သဖြင့်လီးတန်ကြီးမှာ ရမ်း၍သွားသည်။မူမူ၏ရင်ထဲတွင် လှိုကကနဲဖြစ်သွားရပြီး သူမသည်စAိုဝလေးကိုပင် ရှုံ့၍ သွင်းလိုက်မိ၏်……မမမူ….Aဝတ်တွေချွတ်လိုက်တော့လေ……လေသံက တိုးတိုးလေးနှင့်ေAးေAးလေးပင်…….ဒါပေမဲ့ မူမူရင်ထဲတွင်ဒိန်းကနဲ မြည်သွားရသည်။ပြီးတော့သူမကို တဲ့တဲ့ မတ်မတ်ချိန်ရွယ်၍ထားသော လီးတန်ကြီးကို ကြည့်ရင်းက မူမူသည် တုံတုံယင်ယင်ဖြင့်ပင်သူမ၏Aင်္ကျီကိုချွတ်လုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘရာစီယာကိုပါ ချွတလိုက်သည်။ိ်သေနတ်နှင့်ချိန်၍ Aမိန့်ပေးခံလိုက်ရသူပမာ နှစ်ခါမပြောရဘဲ မူမူသည် Aဝတ်တွေကို ချွတ်နေသည်။သူမ၏ကိုယ်မှ ဘရာစီယာလေး ကင်းကွာသွားသည်နှင့် လှုပ်ခါ၍ထွက်လာသော မူမူ၏ နို့Aုံကြီးတွေမှာတင်း၍နေပြီး နို့သီးလေးတွေမှာ နီညိုရောင်လေးများဖြင့် ခပ်ထွားထွားဖြစ်လျှက် ကော့တက်၍နေကြသည်။Aင်္ကျီတွေAားလုံး ချွတြ် ပီးသွားသော မူမူသည် ခပ်တွေတွေလေးရပ်၍နေသည်။
6. …….ထဘီကို ချွတ်လိုက်လေ………မမမူ…..သူ့စကားမဆုံးမှီမှာပင် ဆတ်ကနဲဖြစ်၍ သွားရသော မူမူသည်သူမ၏ထဘီလေးကို ခါးမှဆွဲ၍ဖြေကာလွှတ်ချလိုက်သည်။မူမူ၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ Aဆမတန်ဖေါင်းကား၍နေပြီး Aမွှေးနက်များမှာ ခပ်စိပ်စိပ်ပေါက်၍နေကြသည်။သူမ၏ စောက်ပတ်Aကွဲကြောင်းလေး တဖက်တချက်ရှိ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများသည်သူမ၏စောက်ပတ်Aဝလေးနားတွင် Aိ်မ်ထောင် သက်ရင့်သူဖြစ်သည်နှင့်Aညီ ခပ်ဟဟလေးဖြစ်၍နေသည်။ မူမူမှာရင်Aြုံ ကီးများ နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြင့် ဖြစ်ကာလှိုက်မော၍နေသည်။သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုးတခုလုံးကိုံတပ်မက်စွာဖြင့် ကြည့်နေရင်းကပင် ကျော်စွာသည် သူ၏ကိုယ်လုးတီးကြီးကို ရှေ့သို့ တိုးလိုက်သည်။ံတရမ်းရမ်းဖြစ်၍ သွားရသော ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးသည် မူမူ၏စောက်ပတ်ကြီးနှင့် ထိလုထိခင်ဖြစ်၍သွားရသည်။………မမမူ…….……….ဟင်….. တရမ်းရမ်းဖြစ်သွားသော ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးဆီမှ သူမ၏Aကြည့် များကို ရုတ်သိမ်းကာမူမူသည်မျက်လုံးရွဲကြီးများကို ပင့်၍ ကျော်စွာကို ကြည့်လိုက်၏။ မူမူ၏ မျက်လုံးရွဲကြီးများသည် Aရည်လေးများရစ်ဝုင်းလျှက် တောက်ပ၍နေသည်။ိ………ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်လေ……မမမူ…….မူမူသည် ကျော်စွာကို Aသာလေးခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပြီးမှ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဖြေးဖြေးပင် နောက်သို့လှည့်လိုက်သည်။ထိုAခါတွင်တော့ ထောင်မတ်၍နေသော ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးသည် ဖြူဖွေးမို့ဖေါင်းနေသောမူမူ၏ဖင်သားကြီးနှင့် ဖိကပ်မိလိုက်တော့သည်။ဖင်သားကြီးတစ်ဖက် နွေးကနဲဖြစ်သွားရစU်မှာပင် မူမူသည် သူမ၏ခြေထောက်လေးများ ကို ရှေ့သို့မလှမ်းသေးဘဲပေ၍ ရပ်နေလိုက်မိသည်။ထိုAခိုက်မှာပင် ကျော်စွာ၏လက်နစ်ဖက်က လက်ဝါးနှစ်ဖက်သည် ပျံ့ကား၍ မူမူ၏ ဖင်သားကြီှးတဖက်တချက်သို့ ဖိကပ်ကာ သူမ၏ဖင်သားကြီးတွေကို သုံးလေးခါမျှပင် ဆုတ်နယ်လုက်သည်။ပြီးတော့မှိသူ၏လက်နှစ်ဖက်ကို မူမူ၏တင်သားကြီးများဆီမှ ခွာလိုက်သည်။ထိုAခါမှသာ မူမူသည် ကုတင်ဘေးသို့တိုးကပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ပေါင်တဖက်ကို ကုတင်ပေါ်သို့ ခွ၍တင်လိုက်တော့ရာ ကျန်ခြေထောက်လေးတစ်ဖက်က ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်မှ ထပ်မံ၍ မကြွရသေးမီမှာပင် သူမ၏နောက်သို့ တိုးကပ်လိုက်သော
7. ကျော်စွာက မူမူ၏ခါးလေးကို လက်တဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ ဖက်လိုက်ပြီး ပေါင်တဖက် ကုတင်ပေါ်သို့ရောက်နေသည့်Aတွက်ပြဲကား၍ သွားသော သူမ၏ပေါင်ရင်းနှစဖက်ကြားကို သူ၏လီးတန်ကြီးကိုသွင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လက်တစ်ဖက်က သူ၏လီးတန်ကြီးကို ကိုင်လိုက်ရာက လီးတန်ကြီး၏ထိပ်ကိုမူမူ၏စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့လိုက်သည်။……ဟင်း….မင်းနှယ်……ကြံကြံဖန်ဖန်ကွယ်………..Aို…ဗြိ…..Aမေ့….ကျွတ်…..ဖွတ်….Aင့်…ဟင်း…ဟင်း…..မူမူ၏မျက်လုးလေးများ စင်း၍ကျသွားခဲ့ချေပြီ။ထို့Aပြင် ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးကလဲ မူမူ၏ံစောက်ပတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးထဲသုိ့ တစ်ဆုံးဝင်၍ သွားခဲ့ချေပြီဖြစ်သည်။သူ၏လီးတန်ကြီးမှာ နွေးကနဲ စီးကနဲဖြစ်ကာ မူမူ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်သွား သည်နှင့် ကျော်စွာသည်သူ၏ခါးကို နှိမ့ကာေAာက်ကနေပင့်ပင့်ပြီး ဆောင့်ကာလိုးပါ တော့သည်။ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်၍ လိုးလိုက်သော်ကျော်စွာ၏ဆောင့်ချက်များကြောင့်ပင် မူမူ၏ဖင်းသားလုံးလုံးကြီးတွေ Aိပက်Aိပက်ဖြင့် တုန်ခါ၍နေရသည်။ လိုးစမှာပင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်၍လာသော မူမူ၏စောက်ရည်များသည် သူမ၏ ဆန့်၍ထောက်ထားသော ခြေထောက်လေးရှိ ပေါင်တွင်းသားလေးများပေါ်သို့ပင် စီး၍ ကျနေကြပြီဖြစ်သည်။မူမူသည်လည်း မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မှေးစင်းရင်းထားရာမှ Aံလေးတွေကြိတ်ကာ ကျော်စွာဆောင့်သမျှကိုAံတင်းစွာခံနေသည်။ကျော်စွာသည်လည်း မူမူ၏နောက်မှ နေ၍ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ကာလိုးနေရင်းမှ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကိုနောက်မှနေ၍ ဖက်ထားသော သူ၏လက်က မူမူ၏နို့Aုံကြီးတွေပေါ် လှမ်းလိုက်ရင်း နို့Aုံကြီးတွေကိုဆုတ်ကာနို့သီးတွေကို ချေမွရင်း ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်၍ လိုးသည်။ကျော်စွာ၏ ဆောင့်ချက်များက မည်မျှပင်ပြင်းထန်ထိမိပါစေ၊မူမူ၏ ခြေထောက်တစ်ဖက်က ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်တွင်ထောင်ရင်း တဖက်ကကုတင်ဘေးစောင်း ပေါ်သို့ ဒူးကွေး၍ ခွတင်ထားသဖြင့် ပေါ်နှစ်ဖက်ကားကာစောက်ပတ်ဝကိုဖြဲပေးထားသလိုဖြစ်နေသဖြင့် မူမူမှာ Aားမရနိုင်ဖြစ်၍နေရလေသည်။ကြာလာတော့ မူမူတစ်ယောက် Aားမရနိုင်မှုတွေကိုသီးမခံနိုင်တော့ပါ။…..နေ….နေAုံး….မင်းလီးကို ဖိသွင်းထားလိုက်….ဟုတ်ပီ……
8. မူမူသည် ကုတင်စောင်းတွင် တင်ထားသောသူမ၏ခြေထောက်တဖက်ကို ကုတင်ေAာက်သို့ပြန်၍ချလိုကြ် ပီးသူမ၏ကိုယ်လုံးကိုကုတင်ပေါ်သို့ မှောက်လုက်ပြီး ကုတင်စောင်းကို ဝမ်းဘိုက်ဖြင့်ဖကာ ဖင်သားဖွေးဖွေိးိလုံးလုံးကြီးများကို Aပေါ်သို့ ကော့၍ တင်ပေးလိုက်သည်။….ဆောင့်….ဆောင့်တော့…..ဖွတ်….A..ပြွတ်…ဖွတ်…Aမလေး…Aင်း..ဟင်း…ကျော်စွာကလဲ သူမ၏ဖင်သားကြီး လုံးလုံးတစ်တစ်ကြီးများကိုလက်နှစ်ဖက် ဆုတ်၍ ကိုင်ကာ Aားပါးတရကိုဆောင့်၍လိုးနေပေသည်။ သူဆောင့်၍ လိုးလိုက်တိုင်း Aိကနဲ Aိကနဲတုန်၍တုန်၍သွားရသော မူမူ၏ ဖင်သားကြီးတွေAဖြစ်ကိုကြည့်ကာ ကျော်စာ၏ရမ္မက်စိတ်တွေက ပို၍ပြင်းထန်လာရ ကာ လိုးဆောင့်ချက်တွေကလွဲပို၍သွက်လာသည်။ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်တွင် ထောက်၍ထားသော မူမူ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာ ကား၍ မလာဘဲဟတယ်ဆိုရုံလေးမျှသာ စေ့၍ထားသဖြင့်ပေါင်နှစ်ချောင်းစေ့၍ နေသော ကြောင့်သူမ၏ စောက်ပတ်ဝမှာစေ့၍နေသဖြင့်စောက်ခေါင်းထဲသို့ Aပြင်းAထန် ဆောင့်၍ လိုးနေသောကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးနှင့်စောက်ပတ်တို့မှာ ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ် လေးဖြစ်ကာ နေသည့်Aတွက်နှစ်ယောက်စလုံးမှာ လိုးရ ခံရတာထိထိမမိရိလျှ က် Aရသာတွေ့နေရသည်။ှိတခဏAတွင်းမှာပင် မူမူ၏စောက်ပတ်Aဝမှ ထွက်၍လာသော စောက်ရည်များမှာ သူမ၏ပေါင်သားဖြူဖြူလေးများပေါ်သို့ပင် စီး၍ကျနေကြပေပြီ။မူမူတစ်ယောက် ဘယ်တုံးကများစ၍ ဆန္ဒတွေကိုမျိုသိပ်ခဲ့ရသည်မသိ။Aခု ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးက ကာလAတန်ကြာေAာင် ပိတ်၍ထားခဲ့သောသူမ၏စောက်ခေါင်းကိုထိုးဖွင်းလိုက်သည်နှင့် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရေAာင်ပင် စောက်ရည်များမှာ တမံပွင့်၍သွန်ချလိုကသလိုပင် လိမ့်၍ စီးကျလာန်ေကြသည်။……..ဟင်….ကောင်းလိုက်တာ……..မမရယ်………..ကောင်း…..ကောင်းတယ်…..ဟင်း..ဟင်း….ကောင်းလိုက်တာ…မောင်ရယ်….မူမူ၏ စကားသံလေးက မပီမသ မသဲကွဲလေးဖြင့်ခပ်ချွဲချွဲလေးဖြစ်၍ နေချေပြီ။ Aားရပါးရ ဆောင့်၍ လိုးရင်းကပင် မချိတင်ကဲဖြစ်၍လာရသော ကျော်စွာသည် မူမူ၏ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲလိုက်ရင်းကနက်ရှိုင်းစွာထွက်ပေါ်၍လာသော မူမူ၏ စAိုပေါက်လေးထဲကို သူ၏လက်ညှိုး၊လက်တစ်ဆစ်ခန့်ကို ထည့်၍သွင်းလိုက်ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေးလှည့်ပေးလိုက်သည်။
9. ….ဟင့်….Aို……Aို…Aိုး……မူမူ၏ခါးလေးမှာ ခွက်၍သွားကာ ဖင်သားကြီးတွေမှာ ခါရမ်း၍ သွားသည်။ စAိုပေါက်လေးကို ကလိတာခံလိုက်ရစU်မှာပင် မူမူ၏ စောက်ပတ်ထဲ မှာလည်း ဒလကြမ်းပင်ယား၍တက်လာရတော့သည်။ကျော်စွာတစ်ယောက် Aားပါးတရ ဆောင့်လုးနေသည့်ကြားကပင် မူမူသည် မကြေနပ်နိုင်ဖြစ်၍လာရသည်။ိ…….ဆောင့်….မင်းခါးကိုနိမ့်ပြီးလီးကြီးကို ထောက်ပြီး ဆောင့်..A…ဟုတ် ပီ….Aမလေး…ဖွတ်…Aား…ပြွတ်…ဖွတ်…Aင်း…ဟင်း…ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်….ကျော်စွာကခါးကို နိမ့်၍လီးတန်ကြီးကို နောက်ကနေ၍ ဆောင့်၍လိုးတော့ရာ လီးတန်ကြီးမှာသူမ၏စောက်ပတ်ရှေ့မှ စောက်စေ့လေးကို ဖိကြိတ်ကာပွတ်ဆောင့် နေတော့သဖြင့် မူမူ၏တကိုယ်လုးမှာံတဆတ်ဆတ်ပင် တုန်၍နေရလေသည်။………မမ……Aားရရဲ့လား…ဟင်……….ရတယ်…မောင်ရယ်….မင်း…မင်း…ဆက်ဆောင့်စမ်းပါAုံးကွယ်…ဟင်း..ဟင်း…ကျော်စွာကလဲ မူမူ၏စိတ်ကြိုက်ဆောင့်၍လိုးသည်။မူမူကလည်း ကျော်စွာလိုးသမျှကို Aိပ်ယာပေါ်တွင်မှောက်၍ချထားသော သူ၏ကိုယလုံးတီးလေးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖြစ်၍နေရာမှ သူမ၏ဖင်သားကြီးတွေကိုနောက်သုိ့ပစ်၍ ပစ်၍ကော့ပေးကာ Aားပါးတရကို Aလိုးခံ၍ နေချေသည်။ သဲသဲမဲမဲ လိုးလျှက်ရှိကြသော သူတို့နှစ်ယောက်မှာ တစထက်တစ Aရသာတွေ Aီဆိမ့်၍လာကြရချေပြီဖြစ်သည်။……..Aင်း…ဟင်း..ဟင်း…မောင်…..မမ ပြီး..ပြီးချင်ပြီ….ဟင်း..ဟင်း…ခွာမဆောင့်နဲ့တော့….ကပ်ဆောင့်…ကပ်ဆောင့်ပေးနော်….ဟင်း…. ကျော်စွာသည် မူမူ၏Aကြိုက်ကို Aလိုလိုက်ကာ သူ၏ဆီးခုံကို သူမ၏ ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးကြားနောက်တွင်ဖိကပ်လိုက်ပြီး ခါး၏Aားကိုမယူတော့ဘဲ တင်ပါးနှင့်ပေါင်Aားကို ယူကာ ပင့်၍ ပင့်၍ဆောင့်သည်။ပြီးတော့လဲ ကျော်စွာ၏ လက်နှစ်ဖက်က သူမ၏ခါးကို သေချာစွာ ဆုတ်ကိုင်၍ လီးတန်ကြီးကို တဆုံးနီးပါးထုတ်ကာ ထုတ်ကာဖြင့် Aားကုန်ကြုံး၍ ဆောင့်လေတော့ ရာ ခဏAကြာမှာပင်….
10. …..Aား….မောင်…မောင်….Aိုး….ဟူသော ရေရွတ်သံလေးနှင့် မူမူတစ်ယောက် လူးလှိမ့်သွားရစU်မှာပင်သူမ၏ နောက်မှ ဆောင့်၍လိုးနေသော ကျော်စွာသည်လည်းမူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဒရောသောပါးလှမ်း၍ဖက်ရာမှ သူမ၏ကျောပြင်လေးပေါ်သို့ မှောက်ရက်သားကျသွားရပါတော့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ကုတင်စောင်းတွင် မှောက်ခုံလေးဖြစ်ကာထပ်ရက်သားလေးမှိန်းနေကြသည်။ခဏကြာတော့မှ…….……..ကဲပါ…ဖယ်စမ်းပါUီး….ကျော်စွာရယ်……..ကျော်စွာက မူမ၏ကျောပေါ်တွင် မှောက်ရက်ဖြစ်၍နေသော သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ကြွ၍ူမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ပြီးတော့မှ သူ၏လီးတန်ကြီးကို မူမူ၏စောက်ခေါင်းထဲမှဖြေးဖြေးချင်းဆွဲ၍ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထိုAခါကျတော့မှ မူမူသည် ကုတင်စောင်းတွင်မှောက်ရက်သား လေးဖြစ်၍နေသောသူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ပက်လက်လှန်လိုက်ရာမှ သူမ၏Aကြည့် က Aရည်များနှင့်ပေပွကာ Aသဲယားစရာကောင်းလှသော ကျော်စွာ၏ လီးတန်ကြီးဆီ သို့ရောက်၍သွားသည်။……ဟင်….သူမဟုတ်တဲ့Aတိုင်းဘဲ…..မူမူက မျက်လုံးလေးAဝိုင်းသားဖြင့် တိုးတိုးလေး ညီးညီးညူညူပြောလိုက်သည်။မှန်ပါသည်။တချီပြီးသွားသော ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးမှာ ဘာမှပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ တောင်မတ်ဆဲတောင်မတ်တုန်း ပင် ရှိနေသည်။လီးတန်ကြီးကို ကြည့်လျှက်က မူမူသည် ကုတင်စောင်းတွင် တက်၍ထိုင်လိုက်သည်။ ကျော်စွာက သူမရှိရာဘက်သို့ တိုးလိုက်ပြီး မူမူ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို သူ၏လက်များဖြင့် ဆုတ်ကိုငလိုက်သည်။်……..မမ စောစောက ကျနော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်…..မူမူ၏ မျက်နှာလေးမှာ ရဲသွားသည်။…..……….မသိဘူး………သွား….ပြီတတီမျက်နှာပေးလေးဖြင့် ကျော်စွာကို မျက်စောင်းထိုးလိုက်ရာက မူမူသည် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကီုလှည့်လုက်ကာ ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်၍ လှဲချလိုက်လေ၏ိထိုAခါတွင် ကျော်စွာက ကုတင်လေးကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် သူ၏ခြေထောက်နားတွင် ရှိနေသောမူမူ၏ထဘီလေးကို လက်တဖက်ဖြင့် ကောက်ပြီး ကိုင်လိုက်ရာက ကုတင်ပေါ်သို့ လှမ်း၍ တင်လိုက်သည်။
11. ပြီးတော့ သူသည် မူမူ၏မျက်နှာလေးကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုကသည်။မူမူက ကျော်စွာ၏ Aကြည့်တွေကိုရင်ဆိုင်ကာ ကြည့်လိကြ် ပီးမှ ကျော်စွာကို မျက်တောင်လေးတစ်ချက်ထိုး၍ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုစူတူတူလေးလုပ် ကာ မျက်နှာလေးကို တဖက်သို့ လှည့်လိုက်သည်။ ကျော်စွာက သူ၏လက်တဖက်ထဲမှ ထဘီလေးနှင့် သူ၏လီးတန်ကြီးကို သုတနေသည်။ လီးတန်ကြီ်းတင်သာမက လီးတန်ကြီးAရင်း ဆီးခုံနှင့် ပေါင်ခြံတွေ ကိုပါသုတ်သည်။Aားလုံးသန့်စင်သွားပြီဆိုမှ ကျော်စွာသည် မူမူ၏ပေါင်လေးနှစ်လုံးကို ဆွဲ၍ ကားလိုက်သည်။ပြီးတော့လက်ထဲက မူမူ၏ထဘီလေးဖြင့်ပင် သူမ၏ ပေါင်ခြံ ဆီးခုံနှင့် စောက်ပတ်Aုံကြီးတစ်ခုလုံးသာမကပေါင်တွင်းသားလေးတွေကိုပါ သူမ၏ ထဘီလေး နှင့် သုတ်၍ သန့်စင်ပေးသည်။ ပြီးတော့ မူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဒူးကွေး၍ ထောင်ပေးလိုက်ပြီး သူမ၏ ဖင်ကြားလေးေAာက်သို့ပင်ူထဘီလေးကို ကိုင်ထားသော သူ၏လက်ကို သွင်း၍သုတ်ကာ သန့်စင်ပေးသည်။မူမူက သူမ၏ဖင်ကြီးတွေကိုမြောက်၍ကြွပေးသည်။ကျော်စွာ သန့်စင်ပေးပြီးတော့မှ ဖင်သားကြီးတွေကို မွေ့ယာပေါ်သို့ ပြန်၍ချလိုက်သည်။ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေး တစ်ခုလုံး ငြိမ်သက်ကာ ကျော်စွာက ယုယစွာလုပ်ပေးနေတာလေးတွေကိုမူမူသည် ကြည်နူးပီတိဖြစ်၍နေရသည်။ စောစောက လွှဲထားသော မျက်နှာလေးကိုပင် ပြန်၍လှည့်ကာသူမ၏မျက်လုံးကြီးများက ကျော်စွာကို ကြင်နာစွာဖြင့် ကြည့်၍နေသည်။ Aားလုံးသန့်စင်ပြီးသွားသောAခါတွင်မှ ကျော်စွာသည် ထောင်၍ထားသော မူမူ၏ ပေါင်းလုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုကား၍ ခပ်စိုစိုလေးဖြစ်နေသော မူမူ၏ စောက်မွှေးAုံလေးပေါ် သို့ ထဘီလေး၏မစိုသေးသော Aပိုင်းကိုရွေးကာဖွဖွလေး ပွတ်၍ပေးနေသည်။ တကိုယလုံးငြိမ်သက်စာဖြင့် ခံနေသော မူမူ၏ မျက်လုံးလေးများမှာ မှေးကနဲ မှေးကနဲ ကျ၍နေရသည်။်ွ စောစောက တစ်ချီပြီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်၍ Aတန်ငယ်မျှ တည်ငြိမ်သွားရသော မူမူ၏ ရမ္မက်သွေးတို့သည်ယခုAခါ ပြန်၍လှုပ်ရှားစပြုလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ကျော်စွာကလည်း ထဘီလေးဖြင့် သူမ၏ စောက်ပတ်Aုံကို Aမွှေးလေးတွေပေါ်မှ ဆက်တိုက်ပွတ်၍ပေးနေရာစောစောက စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်၍နေရသော မူမူ၏ စောက်မွှေး လေးများသည် ခြောက်သွေ့သွားရုံမျှမကဘဲပကတိAတိုင်းပင် ခပ်ဖွာဖွာလေး ဖြစ်၍ လာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါသည်။
12. ကျော်စွာသည် ထဘီလေးကို ကိုင်ထားသော သူ၏လက်ကိုကြွလိုက်ကာ ကျန်သော လက်တဖက်ကမူမူ၏စောက်ပတ်AိAိကြီးပေါ်သို့ လှမ်း၍တင်လိုက်ပြီး သူ၏ လက်ညှိုး လက်မတို့ကို မူမူ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုပေါ်တွင် တင်ကာ ဖိလိုက်ပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဖြဲလိုက်သည်။………………Aို………..မောင်…………… မူမ၏ ကိုယ်လုံး ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးမှာ တွန့်ကနဲဖြစ်၍သွားကာ မျက်နှာလေးမှာရဲ၍ သွားသည်။ပြီးတောူ့သူမသည် မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကို မှိတ်၍ချလိုက်တော့သည်။မူမူ၏ စောက်ပတ်Aုံကြီးမှာလဲ ဖေါင်းကား၍ ရှိနေပြီဖြစ်သည့်Aပြင် သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံး မှာလဲလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍နေရလေသည်။ ကျော်စွာသည် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ရာက လက်ထဲမှ မူမူ၏ ထဘီလေးကိုကုတင်ခြေရင်းဖက်သို့ လှမ်း၍ ပစ်လိုက်ပြီး နောက်တွင်တော့ ကျော်စွာ သည် မူမူနှင့် ယှU်လျက်သားAိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲ၍ချလိုကလေသည်။်ကျော်စွာတစ်ယောက် Aိပ်ယာပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်လိုကသည်နှင့် သူ၏လီးတန်ကြီးက်မိုးမျှော်ကာထောင်နေသည်။ဒါကိုပင် မူမူကလဲ မက်မောစွာဖြင့် လှည့်၍ ကြည့်နေသည်။……..မ…..မ……. ဘာလဲဟင်…..မောင်….. မူမက ကျော်စွာ၏ဖက်သို့ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုစောင်းလိုက်ကာ လက်တဖက်ဖြင့်ူကျော်စွာကိုဖက်လိုက်သည်။……..မောင့် လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ပါလား ဟင်………………..Aို………မူမူ၏မျက်နှာလေးမှာ ရှက်သွေးလေးများက ရဲ၍ သွားရပြန်ပါသည်။ဒီကြားထဲကပင် မူမူကကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးကို လှမ်း၍ကြည့်လိုက်သည်။ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးမှာ စောစောက သူမကိုမလိုးမှီကAတိုင်းပင် ပုံစံမပျက်စံချိန်မကျ မာကြောထောင်မတ်လျှက်ရှိသည်။…….လုပ်ပါ မမ…ရယ်…မောင် Aကိုင်ခံချင်လို့ပါ…..ကျော်စွာက ခလေးငယ်ပမာ ပူဆာပြန်ပါသည်။ခက်ပြီ။မူမူက (၃)(၄)နှစ်ပေါင်းလာသော သူမ၏ယောက်ျားကိုမြင့်သွင်၏လီးတန်ကြီးကိုပင် ကိုင်ရမှာဝန်လေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ကိုမြင့်သွင်က Aတင်းAကြပ်လုပ်မှသာ ကိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
13. ခုလဲ ကျော်စွာက Aတင်းAကြပ်ပင် သူ၏လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ရန်ပူဆာနေပေပြီ။ကျော်စွာကိုဖက်၍ထားသော သူမ၏လက်လေးက ကိုယလုံးကြီးေAာက်ဖက်ဆသို့ လျှောတိုက်၍ ဆင်းသွားသည်။ပြီးတော့်ီAုံကောင်းကောင်းဖြင့် ထူထပ်စွာရှိနေသော ကျော်စွာ၏လမွှေးAုံကြီးထဲသို့ မူမူသည် သူမ၏လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးတွေကို ထိုးသွင်းကာ ဖွလိုက်သည်။ ကျော်စွာ၏လမွှေးတွေမှာ စိုထိုင်းထိုင်းဖြင့် ရှိနေသေးသည်။သူမ၏ စောက်မွှေးလေးတွေကိုဖွာလန်ကြဲခြောက်သွေ့ သွားသည့်တိုင် ယုယုယယလုပ်ပေးခဲ့ ပေမဲ့လဲ သူကိုယ်တိုင်တော့ Aမွှေးတွေကစိုထုငးထိုင်းဖြင့်ပင်ရှိနေသေးသည်။ိ် မူမူ၏ရင်ထဲတွင် ကျော်စွာကို သနားသွားမိသည်။မူမ၏ လက်လေးတွေက ကျော်စွာ၏ လမွှေးတွေကိုထိုးဖွပေးနေရုံမျှပင် မဟုတ်ဘဲ ဆီးခုံနှင့် ကျော်စွာ၏ ပေါင်ခြံတို့ကို လက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် လျှေက်၍ပွတ်ပေးကာလီးတန်ကြီးကို ကိုင်ရမည့် Aရေး Aရှိန်ယူ၍နေသည်။ ကျော်စွာကတော့ သူမ၏တကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံး၍ ရမ္မက်ထန်စွာဖြင့် ကြည့်နေသည်။မူမူ၏လက်ကလေးက ခဏAကြာတွင်တော့ ကျော်စွာ၏ လီးတန်ကြီး Aရင်းကို မရဲတရဲလေး လှမ်း၍ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ဖွဖွလေးပင် ဒါပေမဲ့သမ၏ ကိုယ်လုံးလေး တစ်ခုလုံးကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲထ၍ူသွားရသည်။ ထိမိလိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်ပင် ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးက ဆတ်ကနဲဖြစ်၍သွားရသည့် နည်းတူမူမူ၏လက်လေးကလဲ လီးတန်ကြီးကိုတင်းကြပ်စွာ ဆုတ်၍ ကိုင်လိုက်သည်။ သူမ၏ ရင်ထဲတွင်ကြေနပ်သလိုဖြစ်ပေါ်၍ ခံစားသွားရသည်။ မူမူသည် လီးတန်ကြီးကို တင်းကြပ်စွာ ဆုတ်ကိုင်ထားသည်။သူ၏ လက်ချောင်းလေးများကိုပြန်၍လျှော့လိုက်ကာ သူမ၏ လက်လေးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖြင့် လုပ်၍ လီးတန်ကြီးကို Aရင်းမှAဖျားတိုင်ပွတ်သပ်၍ ပေးနေမိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးရင်းကပင် မူမူ၏ ကိုယ်Aတွင်းရှိ ရမ္မက်သွေးတို့သည် ပို၍တိုးကာထကြွလာရသည်။ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးပေါ်တွင် Aရင်းမှ Aဖျား၊ Aဖျားမှ Aရင်းတိုင် လျှောတိုက်၍ပွတ်ပေးနေသော သူမ၏လက်လေးသည် ပိုမို၍ သွက်လက်မြန်ဆန်လာသည်။ ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးကလဲ မူမူ၏ လက်ထဲတွင်ပင် ပို၍မာကြောလာရသည်။ပို၍ လည်း ဖေါင်းတင်းလာရသည်။ မူမူသည် ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးကို ပွတ်သပ်၍ ပေးရင်းကပင် သူမ၏တကိုယ်လုံး မရိုးမရွဖြင့် ဖြစ်၍လာရသည်။
14. သူမသည် ကျန်သောသူမ၏ လက်လေးတစ်ဖက်၏တံတောင်ဆစ်ဖြင့် မွေ့ယာပေါ် သို့ ထောက်လိုက်ကာခေါင်းထောင်၍ လီးတန်ကြီးကို ကြည့်လိုကသည်။်ပြီးတော့ကျော်စွာ၏ လီးတန်ကြီးပေါ်တွင် စုန်ဆန်ကာ ပြေးလွှားနေသော သူမ၏လက်လေးကိုရပ်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးပေါ်မှခာလိုက်သည်။ ထို့နောက် မူမူသည် သူမ၏ လက်ညှိုး လက်မလေးတို့ဖြင့်ွလီးတန်ကြီး၏ဒစ်ကြီးေAာက်နားဆီသို့ ညှပ်၍ ကိုင်ကာ မာတောင်၍နေသော လီးတန်ကြီး၏Aပေါ်ယံရှိAရေပြားကို ဖြေးဖြေးလေးေAာက်သို့ ဆွဲ၍ချလိုက်သည်။ ထိုAခိုကAတန့်မှာပင် လီးတန်ကြီးကို မျက်တောင်မခတ် ကြည့်၍နေသော မူမူသည် Aသက်ကိုေAာင့်၍ထားလိုကမိသည်။်လီးတန်ကြီး၏ Aရေပြားသည် တဖြေးဖြေးေAာက်သို့ လျှော၍ပါလာရာမှ လက်နှစ်လုံးသာသာခန့်တွင်တန့်ကနဲရပ်၍သွားသည်။ထိုAခိုက်မှာပင် ကျော်စွာ၏ ကိုယ်လုံးကြီးသည် တွန့်ကနဲဖြစ်၍သွားသည်။လီးတန်ကြီးကတော့ ထိပ်ပိုင်းတဝက် လောက်ထိကို ပြဲလန်၍ နီရဲသွားသည်။ဒါကိုပင် မူမူက ခဏကြာသည်Aထိ မက်မောစွာဖြင့် ကြည့်နေမိသည်။ကြည့်နေရင်းက ပင် မူမူသည်သူမ၏ပေါင်လုးလေးနှစ်လုံးကို ပွတ်၍ပေးနေမိသည်။ံခဏကြာတော့မှ သူမဆွဲလှန်၍ ချထားသောလီးတန်ကြီး၏ Aရေပြားကို Aသာလေးပြန်၍ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပြီး လီးတန်ကြီး၏ ဒစ်ကြီးေAာက်နားတွင် ညှပ်၍ကိုငထားသော သူမ၏လက်ညှိုး၊လက်မတို့ကိုမခွာဘဲ ဖိကြိတ်၍ ပွတ်ပေးနေသေးသည်။ ကျော်စွာ၏ရင်Aုံကြီးများသည် နိမ့်ချီ မြင့်ချီဖြစ်၍လာသည်။ပြီးတော့လဲ ခါးကြီးသည် တတွန့်တွန့်ဖြစ်၍လာသည်။တခဏAတွင်းမှာပင် လီးတန်ကြီး၏ ထိပ်ရှိ Aပေါက်လေးမှ Aရေကြည်လေးတွေမှာစိမ့်၍ထွက်လာသည်ကို မူမူသည် တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ သူမ၏ တကိုယ်လုံးမှာလဲ ရှိန်းဖိန်း၍လာခဲ့ရပြီဖြစ်သည့်Aပြင် သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲမှ ယားကနဲယားကနဲ ဖြစ်၍လာကာ စောက်ရည်လေးများသည် စိမ့်၍ထွကလာကြပေပြီ။ရင်ထဲတွင်လဲ ဖို၍လာရသည်။်ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးကိုလက်ဖြင့် တင်းကြပ်စွာဆုတ်လိုက်ရာမှ မူမူသည် ထောက်၍ထားသောသူမ၏တတောင်ဆစ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ကာ Aိပ်ယာပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်၍ Aချလိုက်တွင်တော့ကျော်စွာသည် မူမူ၏ဘက်သို့ စောင်းလိုက်ရာက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်လိုက်သည်။ပြီးတော့ခေါင်းထောင်၍ထလာသော ကျော်စွာသည် သူမ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့၍ ပေးပြန်ပါတော့သည်။ တဖက်က နို့ကိုစို့နေစU်တွင် ကျန်သော နို့Aုံကြီးတစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဆုတ်နယ်၍ပေးနေသည်။ပြီးတော့ စို့ပေးနေသော နို့ကြီး၏ နို့သီးလေးကို လျှာဖြင့်လှည့် ပတ်ကာ ပွတ်ပေး ယက်ပေးနေသလို
15. ကျန်သောနို့Aုံကြီးရှိ နို့သီးခေါင်းလေးကိုလည်း လက်ညှိုး၊လက်မတို့ဖြင့် ညှပ်ကာ လှည့်ပေးသည်။ပွတ်ပေးသည်။ ချေမွ၍ပေးပါသည်။ဤသို့ဖြင့်ပင် ကျော်စွာသည် မူမူ၏ နို့Aုနှစ်လုံးကို တစ်ဖက်စီပြောင်း၍ စို့ပေးနေသလို တဖက်စီလည်းံကိုင်၍ဖျစ်ညှစ်ပေးနေသည်။ ကာမစိတ်တွေ ယိုဖိတ်နေသော မူမူခမျာမှာတော့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ လူးကာလွန့်ကာဖြင့်ဖြစ်နေရင်း သူမ၏လက်လေးတစ်ဖက်က ကျော်စွာ၏ လည်ပင်းကို ရစ်သိုင်း၍ ဖက်ထားသလိုကျန်လက်တစ်ဖက်ကလဲ ကျော်စွာ၏ ဆံပင်တွေကြားသို့ထိုး ဖွကာ မချင့်မရဲဖြင့် ဖြစ်နေရှာလေသည်။……….တော်….တော်တော့…မောင်ရယ်….Aချိန်ကမနဲတော့ဘူး…တယောက်ယောက် တွေ့သွားရင်ခက်မယ်……..လုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့ကွယ…….်ရမ္မက်စိတ်တွေ Aပြင်းAထန်ဖြစ်၍ လာရာမှ Aလိုးခံချင်စိတ်တွေ မချိမဆန့် ခံစားဖြစ်ပေါ်လာရသည်ကို မူမူက ကွယ်ဝှက်လျှ က် ကျော်စာက သူမကို မြန်မြန်လိုးရန် နှိုးဆော်၍ နေသည်။ွမူမူ၏စကားက ကျော်စွ၏ မိန်းမ ဖြူမာပြန်ရောက်လာမှာကို ရည်ညွန်း၍ပြော ဆိုနေသော်လည်းဖြူမာမှာ မူမူကို နှုတ်ဆက်သွားစU်က မိုးချုပ်မှပြန်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောသွားသည်ကို ကျော်စွာကလဲAသိပင်ဖြစ်သည်။Aခုမှ နေ့လည်(၁၂)နာရီ ကျော်ရုံသာရှိသေးသည်။ Aားလုံးကို တွက်ဆလိုက်တော့ Aကင်းပါးသော ကျော်စွာက မူမူတစ်ယောက် Aလိုးခံချင်လို့ဖျပ်ဖျပ်လူးဖြစ်နေရပြီိကို သိလိုက်ရသည်။ကျော်စွာသည် သူ၏မျက်နှာကို မူမူ၏ ရင်ဘတ်ပေါ်မှခွာလိုက်ရာက သူမ၏ကိုယ်လုံး လေးဘေးတွင်ထ၍ထိုင်လိုက်သည်။………………….မမ…….. ……….ဟင်…….…….စောစောက မမ ပြောတဲ့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တော့လို့ ပြောတာ…ဘာလုပ်ရမှာလဲ………….သိဘူး…..သွား…….……….Aင်း….မမ…က……မသိဘူးဆိုရင်လဲ…….မတတ်နိုင်ဘူးလေ……ကျော်စွာက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြော၍ Aိပ်ယာထဲသို့ ပြန်၍ လှဲချလိုက်ရန်ပြင်လိုက်၏ဒီတော့လဲ မူမူ၏လက်တစ်ဖက်က သူ၏လက်မောင်းကို လှမ်း၍ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။
16. ပြီးတော့……Aို…ဟင့်…..လုပ်မှာ………လုပ်တော့လေ….. မူမူတစ်ယောက် Aလိုးခံချင်နေတာ ဖျတ်ဖျတ်လူးနေသည်။Aိနြေ္ဒပင် မဆောင်နိုင် တော့ပါ။သူမ၏ပေါင်လုံးလေးနှစ်လုံးမှာလည်း ပူးကပ်၍ လိမ်နေကြသည်။ကျော်စွာ၏မျက်နှာက သူမ၏မျက်နှာပေါ်သို့ ငုံ့၍ဆင်းသွားသည်။ပြီးတော့ မူမူ၏ ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကိုခပ်ကြာကြာလေး နမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့မှ………..ဘာလုပ်ရမှာလဲ….ဟင်….မမ….ဟု တိုးတိုးလေးမေးလိုက်သည်။သည်တခါတော့ မူမသည် မထူးတော့ပါဘူးဟု စိတ်ကို ပိုင်းဖြတ်ကာ…….ူ……လိုဖို့….မမကို လိုးပေးဖို့ပြောတာ…..ကဲ…သိပြီလား..ဟုဆိုကာ သူမ၏မျက်နှာလေး ကို Aလွှဲလိုက်တွင်တော့ ကျော်စွာက သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို သူမ၏ခြေရင်းဖက်သို့ ရွေ့လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မူမူ၏ ခြေထောက်လေး နှစ်ဖက်ကိုကွေးပေး၍ ပေါင်လေး နှစ်ချောင်းကိုကားလိုကြ် ပီးတော့မှ ကျော်စွာသည် သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲတွင် ဝင်၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လုက်ပြီး ရှေ့သုိ့တိုးကပ်လိုက်ရာကကွေးထားသော သူမ၏ ဒူးဆစ်ေAာက်နားမှနေ၍ သူမ၏ခြေထောက်လေးများကို မကာခြေသလုံးလေးများကို သူ၏ ပေါင်တစ်ဖက်တချက်ပေါ်တွင် တင်၍ ကျော်ကာချပေးလိုက်သည်။ ကျော်စွာက ဖေါင်းကား၍နေပြီဖြစ်သော သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို ငုံ့၍ကြည့်လိုက်တော့၊ စောက်ပတ်ဝမှနေ၍ စောက်ရည်လေးများမှာ စိမ့ကနဲ စိမ့်ကနဲ ထွက်နေကြသည်။်ကျော်စွာသည် သူ၏လီးတန်ကြီးကို Aရင်းမှ ကိုင်ကာပြောင်တင်း၍ကားနေသော သူ၏လီးတန်ကြီးထိပ်ဖးကြီးနှင့် သူမ၏စောက်ပတ် Aကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ကို စုန်ကာ ဆန်ကာ ဖိ၍ ပွတ်ပေးနေသည်။မူမူ၏ူဖင်သားကြီးများမှာ တလိမ့်လိမ့်ဖြင့် ဖြစ်၍နေသည်။ စောက်ပတ်ဝထိပ်နားရှိ စောက်ပတ် Aကွဲကြောင်းထဲမှ Aပြင်သို့တစ်လစ်လေး ပြူ၍နေသောစောက်စေ့လေးကို လီးတန်ကြီးထိပ်ဖြင့် ဖိ၍ ဖိ၍ ပွတ်ပေးသည်။…….ကျွတ်…ကျွတ်…ကျွတ်..ဟင်း…မောင်…မမ…ကို မညှင်းဆဲပါနဲ့တော့ကွယ်….……မမ စောက်ပတ်ထဲက ယားလှပါပြီ…ဟင်း…လိုး…မြန်မြန်လိုးပေးပါတော့နော်…. တကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါသွားရင်းက မူမူသည် မပီမသလေးဖြင့် ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့လေးဖြင့်ပြော၍လာရှာသည်။………မောင် လိုးတော့မယ်နော်……တော်တော်ကြာမှ နာလှချီရဲ့ဆိုပြီး…မပြောနဲ့….
17. ……ဟွန်း….မင်းကလား….မမခံနိုင်ေAာင်ခံမယ်….မင်းလိုးချင်သလောက် လိုးပစ်လိုက်စမ်း…… ကျွဲမြီးတိုသွားသော မမမူက ကျော်စွာကို Aားကျမခံပြောလိုက်သည်။ကျော်စွာက ပြုံးလိုက်သည်။…..ကဲ…မမ…..စောက်ပတ်ကြီးကို ဖြဲပေး…………Aို……Aိုကနဲသာ တုန်လှုပ်၍သွားရသည်။သူမ၏ တုန်ယင်၍နေသော လက်စောင်းလေးများ ကတော့သူမ၏ပေါင်ကြားသို့ ရောက်ရောက်၍လာကာ ဖေါင်း၍ထနေသော သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုပေါ်သို့ တင်လိုက်ရာက ဘေးတဖက်တချက်ဆီသို့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကို ဆွဲ၍ဖြဲပေးလိုကတော့ရာ နီစွေးသော Aတွင်းသားလေးများ ထွက်ပေါ်၍လာကာ စောက်ပတ်ကြီး ပြဲသွားသည်နှင့်ကျော်စွာက သူ၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ကာ တခါတည်းပင် ဖိ၍ တဆုံးဝင်ေAာင်လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။…….ဗြွတ်….ဖွတ်……..Aင်း…. မူမူ၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ကော့၍ တက်သွားရသော်လည်း သူမ စကားနှင့်သူမမို့ မူမူသည် မညီးမိစေရန်မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံးရှုံမဲ့၍ သွားရသည်ကပင် သူမ၏ေAာက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်၍မဲတင်းထားလိုက်ရသည်။စောက်ပတ်ဝကို Aစွမ်းကုန် ဖြဲပေးကာ တရှိန်ထိုးဆောင့်၍ လီးAဆုံးဝင်ေAာင်လိုးသွင်းလိုက်တာကို ခံလိုက်ရသည့် ဒါဏ်မှာ မသေးလှပါ။မူမူလို (၃)(၄)နှစ် Aလိုးခံထားဖူးသူပင်လျှင်ဖျတ်ဖျတ်လူး၍ Aသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်၍ သွားရသည်။ ကျော်စွာသည် သူ၏လီးတန်ကြီး မူမူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တစ်ဆုံးဝင်၍ သွားAပြီးမှာပင်သူ၏လက်နှစ်ဖက်က မူမူ၏ဆူဖြိုးလှသော နို့Aုံကြီးနှစ်လုံးကို လှမ်း၍ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ကာဖြစ်ညစ၍ပေးနေသည်။နို့သီးတွေကိုလဲ ချေမွ၍ ပေးနေသည်။ှ် သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တစ်ဆုံးဝင်နေသော ကျော်စွာ၏လီးတန်ကြီးသည်ခဏတာငြိမ်သက်၍နေသော်လည်း မူမူခမျာ စောစောက လီးသွင်းဒါဏ်ကြောင့် Aီဆိမ့်၍ သွားခဲ့ရသည်မှာAရှိန်မသေသေးသောကြောင့် ဘာမျှ မပြောရှာပါ။ ကျော်စွာက သူမ၏နို့တွေကို ဆုပ်နယ်ပေးရင်းမှပင် ခဏAကြာတွင်တော့ မူမူ၏စောက်ခေါင်းထဲရှိတစ်ဆုံးဝင်နေသော သူ၏လီးတန်ကြီးကိုခပ်ဖြေးဖြေးပင် ဇကောဝိုင်းလှည့်၍ ပေးသည်။ မူမ၏ဖင်သား ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးများ လူးလိမ့်လိမ့်ဖြင့် ဖြစ်၍လာကြရသည်။ူ
18. သူမ၏ စောက်ပတ်ဝတွင် ပတ်ချာလည်လည့်ကာပွတ်နေသော လီးတန်ကြီးက ခပ်ထွားထွားဖြစ်၍နေသှောသူမ၏စောက်စေ့လေးကိုပါ ဖိညှစ်၍ ပွတနေတော့ရာ Aဆမတန် ဖေါင်းကား၍ဖြစ်နေသော်မူမူ၏စောက်ပတ်ကြီးသည် ကော့၍ ကော့၍ တက်လာရလေသည်။……..ကျွတ်…ကျွတ်…..Aင်း…..ဟင်း…ဟင်း……. ကျော်စွာသည် တဆုံးဝင်နေသော သူ၏လီးတန်ကြီးကို ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်သည်။ ထုတ်တာမှထ်ိပ်ဖူးကြီးတဝက်လောက်ပေါ်သည်ထိ ဆွဲ၍ထုတ်သည်။ မူမူ၏စောက်ခေါင်းထဲမှ တဆုံးနီးပါး ဆွဲ၍ထုတ်လုက်သော ကျော်စွာ၏ လီးတန်ကြီးတွင်ိသူမ၏စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ ပေကျံကပ်ညိ၍ ပါလာကြရာ လီးတန်ကြီးမှာ ပြောင်လက်၍နေသည်။ လီးတန်ကြီးကို တဆုံးနီးပါး ထုတ်ပြီးမှ စောက်ခေါင်းထဲသို့Aားကုန် ဆောင့်ကာ လိုးပြီးပြန်သွင်းလိုက်သည်။……ပလွတ်…..ဖွတ်…..Aမလေး….ကျွတ်…ကျွတ်….ကျွတ်……. လီးတန်ကြီး တဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် လီးတန်ကြီးAရင်းကို သူမ၏စောက်ပတ်ဝ တွင် ဖိကပ်လိုက်ရာကဇကောဝိုင်း ဖြေးဖြေးလေးလှည့်ပေးနေပြန်ပါသည်။…….ပြွတ်…ဖွတ်…..Aား…ကျွတ်…ကျွတ်…..ဟင်း….ဟင်း….မောင်…ရယ်…. လီးတန်ကြီးက သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်၍ သွားသည်နှင့် သူ၏ လီးတန်ကြီးAရင်းနှင့်မူမူ၏စောက်ပတ်ဝကိုဖိကပ်လိုကြ် ပန်ပါသည်။……မရပ်နဲတော့….မရပ်နဲ့တော့….ဆက်…ဆက်…ဆောင့်…Aမလေး…မောင်ရယ်…့ ……….ဟင်း……..ဟင်း………..ကျော်စွာက သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ချက်ခြင်းပင် ထုတ်၍ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာဖြင့် ပြန်သွငးရင်းလိုးပါတော့သည်။ မူမူကလဲ ဖေါင်းကား၍ စိုရွဲနေသော သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ ကော့၍ Aလိုးခံနေသည်။ ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ကာလိုးနေသောကြောင့် ကျော်စွာသည် သူ၏ လီးတန်ကြီးကိုတဆုံးနီးပါးထိ မထုတ်နိုင်တော့ပါ။လီးတန်ကြီးကို တဝက်သာသာပင် ထုတ်၍ လိုးနေရလေသည်။
19. ဒါပေမဲ့လဲ ကျော်စွာက သူ၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲတွင် လီးတန်ကြီးနှင့် စောက်ပတ်Aတွင်းသာလေးများ ထိထိမိမိဖြစ်စေရန် လီးတန်ကြီးကို Aပေါ်သို့ ကော်၍တမျိုး၊ေAာက်သို့စိုက၍ တဖုံ်ဘေးတဖက်တချက်စီသို့ စောင်း၍ ထိုးကာ လိုးတာကတမျိုး နည်းမျိုးစုံေAာင် ဆောင့်၍ လိုးနေတော့ရာမူမူခမျာ သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုးလေးမှာ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် လှုပ်ရှား၍နေရရင်း တAင်းAင်း ဖြင့်ံညှီး၍ လာရတော့သည်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရာက ဆောင့်၍ လိုးနေသော ကျော်စွာသည် ဖြေးရာမှ မြန်…..မြန်ရာမှ နှေးဆိုတာမျိုးလို တချက်ခြင်း ခပ်ဖြေးဖြေးဆောင့်၍ တမျိုး ခပ်သွက်သွက် ဆက်တိုက် ဆောင့်၍တဖုံ Aားကိုလိုသလိုတိုးကာ လျှော့ကာဖြင့် ဆောင့်၍ နေပြန်တော့ Aားရပါးရပင် စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ကာAလိုးခံနေသော မူမူသည် တကိုယ်လုံး Aီဆိမ့်၍ တက်လာရာကပင် သူမ၏စိတ်တွေကို မနဲပင် ထ်ိန်း၍နေရလေသည်။ ထို့ပြင် သူတို့နှစ်ယောက် လိုးနေကြသော ကုတင်ကြီးက တကျွီကျွီမြည်၍ လာရသလိုလီးတန်ကြီးကစောက်ခေါင်းထဲသို့ ထုတ်ချီ သွင်းချီဖြင့်လိုးနေသည့် Aသံတွေကလဲ ညံ၍ထွက်နေရသည်။…….ပြွတ်….ပလပ်……Aင့်…..ပြွတ်……ဖွတ်…..…….မောင်…မမကို လိုးရတာ ကောင်းလားဟင်…..……..ကောင်းတယ် မမရယ်…..သိပ်Aရသာရှိတာပဲ…………လုပ်…လုပ်….AားရေAာင်လုပ်….မမလဲ သိပ်ကောင်းလာပြီ….ဟင်း..ဟင်း..ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ ထားသောကျော်စွာ၏ပေါင်တဖက်တချက်တွင် တင်၍ထားသော မူမူ၏ခြေထောက်လေးများက ကျော်စွာ၏ခါးကို ချိတ်၍ လာပြီးAားယူကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ကော့၍ပေးနေသည်။ထိုကာလမှာပင် တကိုယ်လုံး Aီဆိမ့်၍ လာရသော ကျော်စွာသည် လီးတန်ကြီးကို သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှနေ၍ တဆုံးနီးပါး ဆွဲ၍ ဆွဲ၍ ထုတ်ကာ Aားကုန်ပင် ဆောင့်၍ လိုးလာတော့သည်။…….ဟင်း….ဟင်း…မမ…ပြီးတော့မယ်…..မောင်ရယ်….ဟင်း..ဟင်း..မူမူတစ်ယောက် တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့်ပင် ဖြစ်၍လာရသည်။Aားကုန်ဆောင့်ကာ လိုးနေသည့်ကြားမှပင်ကျော်စွာသည် မူမူနှင့် သူ၏မိန်းမ ဖြူမာတို့ကို နှိုင်းယှU၍ စU်းစားနေမိသည်။်ဖြူမာသည် မူမူထက်(၇)နှစ်(၈)နှစ်မျှငယ်ပြီး နုနယ်သည်မာ မှန်ပါသည်။ှ
20. သို့ရာတွင် ဖြူမာထက် Aသက်(၇)နှစ်(၈)နှစ်မျှ ပို၍ ကြီးကာ မှည့ဝင်းနေသော Aသီးပမာဖြစ်နေသော်မူမူကိုလိုးရတာက ပို၍ Aရသာရှိကာ ထူးကဲစွာ Aီဆိမ့်လှ သည်ကို တွေးလိုက်မြိ ပီး ခဏတွင်တော့Aားကုနတချက်ဆောင့်ပြီး ကျော်စွာ၏ ကိုယ်လုံးကြီးသည် မူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှေက်၍ ကျသွားကာ သူမ၏်ူကိုယ်လုံးလေးကို ငုံ့၍ ဖက်လိုက်စU်မှာပင် မူမူကလည်း ကျော်စွာ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဆီးကြို၍ ဖက်လိုက်ရင်းသူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို Aစွမ်းကုန်ပင့်ကာ ကျော်စွာ၏ လီးတန်ကြီးကို Aရင်းဆီသို့ Aတင်းပင် ဖိကပ်၍ပေးလိုကပါတော့လေသည်။်ပြီးပါပြီ……….